I-FAQ-I-NBC yeTekhnoloji yeTekhnoloji yaseKhompyuter, Ltd.
Yintoni enokutsha kwesinxibelelanisi?
Zonke izinto ezinokudityaniswa nombane, ezinokubangela umlilo, ke isinxibelelanisi kufuneka sixhathise umlilo. Kucetyiswa ukuba ukhethe isinxibelelanisi samandla esenziwe kukudlula kwelangatye kunye nezinto zokucima.
Zithini iimpembelelo zeparameter yokusingqongileyo kwisinxibelelanisi?
Ipharamitha yokusingqongileyo ibandakanya ubushushu, ukufuma, utshintsho lobushushu, uxinzelelo lomoya kunye nomhlwa. Njengoko ezothutho kunye nendawo yokugcina inefuthe elibonakalayo kwisinxibelelanisi, ukhetho lwekhonkco kufuneka lusekwe kwimeko eyiyo.
Zithini iindidi zezihlanganisi?
Izidibanisi zinokuhlelwa kwisinxibelelanisi esikwisantya esiphezulu kunye nesinxibelelanisi samaza asezantsi esekwe kubuninzi. Inokuhlelwa ngokusekwe kubume be-conncetor ejikeleze kunye nesixhumi esixande. Ngokwendlela yokusetyenziswa, izihlanganisi zingasebenzisa kwibhodi eprintiweyo, izixhobo zekhabhinethi, izixhobo zesandi, isixhobo sokudibanisa amandla kunye nolunye usetyenziso olukhethekileyo.
Luyintoni uxhulumaniso olufakelwe kwangaphambili?
Uqhagamshelo lwangaphambi kokufakwa kwento ikwabizwa ngokuba ngumnxibelelanisi wokufuduswa, owenziwe ngo-1960 e-US Inezinto ezinjengokuthembeka okuphezulu, ixabiso eliphantsi, kulula ukuyisebenzisa, njl njl. Kufanelekile ukuba uqhagamshele ngentambo yetape. Akukho sidingo sokususa umaleko wokubambelela kwikhebula, kuba lixhomekeke kumthombo woqhakamshelwano omile u-U, onokuthi ungene ngaphakathi ekubambeni, wenze umqhubi angene kumjelo kwaye avalelwe kumjelo wentwasahlobo yoqhakamshelwano, ukuze kuqinisekiswe ukuhanjiswa kombane phakathi komqhubi kunye nentwasahlobo yegqabi iyaqina. Unxibelelwano olungafakwanga ndawo lubandakanya izixhobo ezilula, kodwa intambo enesilinganisi socingo esikalisiweyo iyafuneka.
Zeziphi iindlela zokudibanisa isinxibelelanisi?
Iindlela zibandakanya i-weld, uxinzelelo lwe-welding, uqhagamshelo locingo, uqhagamshelo olungaphambi kokufakwa i-insulated, kunye ne-screw fastening.
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nobushushu bendawo yokudibanisa?
Ubushushu obusebenzayo buxhomekeke kwizinto zesinyithi kunye nezinto zokugquma zesidibanisi. Ubushushu obuphezulu bunokutshabalalisa izinto zokwambathisa, ezinciphisa ukumelana nokugquma kunye nokugquma kokuvavanywa kwamandla ombane; Kwisinyithi, ubushushu obuphezulu bungenza indawo yokudibana iphulukane nokomelela, ukukhawulezisa igcwala kunye nokwenza izinto zokubopha zijika imetamorphic. Ngokubanzi, ubushushu bendalo buphakathi kuka -55.
Buyintoni ubomi boomatshini besinxibelelanisi?
Ubomi boomatshini ngamaxesha apheleleyo okuplagi kunye nokukhupha iplagi. Ngokubanzi, ubomi boomatshini buphakathi kwama-500 ukuya kuma-1000 amaxesha. Ngaphambi kokufikelela kubomi boomatshini, ukumelana koqhakamshelwano lokudibana, ukumelana nokugquma kunye nokugquma kokuvavanywa kwamandla ombane akufuneki kudlule ixabiso elilinganisiweyo.
Ngawaphi amandla esixhobo sokudibanisa isixhobo sebhodi?
Isinxibelelanisi sebhodi ye-ANEN yamkele isixhobo esidityanisiweyo, abathengi banokulandela ngokulula ubungakanani bomngxuma kulwazi oluchaziweyo kunye nokubopha.
Iyintoni intsingiselo ye "MIM"?
I-Metal Injection Molding (MIM) yinkqubo yesinyithi apho isinyithi esisebenza kakuhle sixutywe nezinto zokubopha ukwenza i "feedstock" ethi emva koko yenziwe yomelele kusetyenziswa ukubumba ngenaliti. Itekhnoloji ephezulu eye yaphuhla ngokukhawuleza kule minyaka.
Ngaba eyindoda ye-IC600 isinxibelelanisi siyonakala ukuba siwela phantsi ukusuka kubude obahlukeneyo?
Hayi, eyindoda ye-IC600 isinxibelelanisi ihlolwe phantsi.
Zithini izinto zokuvelisa isixhobo sokugcina isixhobo sokudibanisa i-IC 600?
Izixhobo zibandakanya ubhedu lwe-H65. Umxholo wobhedu uphezulu kwaye umphezulu wesiphelo ugqutyuthelwe ngesilivere, ethe yonyusa kakhulu ukuqhuba kwesinxibelelanisi.
Uyintoni umahluko phakathi kwesihlanganisi samandla se-ANEN kunye nabanye?
Isidibanisi samandla se-ANEN sinokuqhagamshela ngokukhawuleza kwaye sikhawuleze. Inokudlulisa umbane kunye nevolthi ngokuthe chu.
Sisebenza njani isinxibelelanisi soshishino?
Izihlanganisi zeshishini zilungele isikhululo samandla ombane, imoto yenkunkuma engxamisekileyo, iyunithi yamandla, igridi yamandla, isikhululo seenqwelomoya, kunye nokumbiwa kwemigodi, njl.
Ungayidibanisa njani i-IC 600 yeBhodi imbonakalo yesinxibelelanisi somzi mveliso?
Inkqubo yokufaka: Amanqaku kwiplagi kunye nesokethi kufuneka afakwe. Faka iplagi kunye nesokethi ukuya estopini, emva koko faka ngakumbi uxinzelelo lwe-axial kwaye ujike ngaxeshanye ngasekunene (kubonwe kwiplagi kwicala lokufakwa) kude kube kukhutshwa ibheyunethi.
Inkqubo yokukhupha iplagi: tyhala iplagi phambili kwaye ujike ngasekhohlo ngaxeshanye (ngokusekwe kwicala oya kulo xa ufaka) de amanqaku kwiiplagi aboniswe kumgca othe ngqo, emva koko ukhuphe iplagi.
Uvavanya njani ubungqina bomnwe kwisinxibelelanisi?
Inyathelo 1: faka incam yomnwe wobungqina bomnwe ngaphambili kwimveliso ide ingatyhaleki.
Inyathelo 2: faka ipali engalunganga ye-multimeter ezantsi kwimveliso ide ifikelele kwisiphelo sangaphakathi.
Inyathelo lesi-3: sebenzisa ipali efanelekileyo ye-multimeter ukuchukumisa ubungqina bomnwe.
Inyathelo 4: ukuba ixabiso lokumelana neli-zero, ke ubungqina bomnwe abufikeleli kwisiphelo kwaye uvavanyo luphumelele.
Yintoni ukusebenza kwendalo esingqongileyo?
Ukusebenza kwendalo esingqongileyo kubandakanya ukumelana nobushushu, ukunganyangeki kokufuma, ukungcangcazela kunye nefuthe.
Ubushushu ukumelana: iqondo lobushushu eliphezulu ukusebenza isinxibelelanisi 200.
Yintoni ubhaqo lokuhlukanisa umngxunya omnye?
Ukwahlulahlula umngxunya omnye kubhekisa kumandla okwahlulahlula indawo yonxibelelwano ukusuka ekungahambini ukuya kwimotorial, esetyenziselwa ukumela unxibelelwano phakathi kwepini yokufaka kunye nesokethi.
Yintoni ukufumanisa kwangoko?
Ezinye iiterminal zisetyenziselwa iimeko zentshukumo ezinamandla.
Olu vavanyo lusetyenziselwa ukuvavanya ukuba ngaba ukunganyangeki koqhakamshelwano kuyafaneleka, kodwa akuqinisekiswanga ukuba kunokuthenjwa kubume obunamandla. Ukusilela kwamandla kwangoko kunokuvela nakwisihlanganisi esifanelekileyo kuvavanyo lokulinganisa indawo, ngenxa yoko kwiimfuno ezithile zokuthembeka kweetheminali kungcono ukuqhuba uvavanyo lokungcangcazela olunamandla ukuvavanya ukuthembeka kwalo.
Uwujonga njani umgangatho wesiphelo sendlela?
Xa ukhetha i-wiring terminal, kufuneka yahlule ngononophelo:
Okokuqala, jonga inkangeleko, imveliso elungileyo ifana nomsebenzi wezandla, onika umntu imincili kunye neemvakalelo ezithandekayo;
Okwesibini, ukhetho lwezinto kufuneka lube lolulungileyo, iinxalenye zokugquma kufuneka zenziwe ngeplastikhi zobunjineli zedangatye kwaye izinto ezenziwayo akufuneki zenziwe ngentsimbi. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukusetyenzwa kwemisonto. Ukuba ukwenziwa kwemisonto akulunganga kwaye umzuzu wethambo awufikeleli kumgangatho, umsebenzi wocingo uya kulahleka.
Zine iindlela ezilula zokuvavanya: ukubonwa (jonga ukubonakala); ubungakanani bobunzima (ukuba bulula kakhulu); usebenzisa umlilo (ukudangatye kwelangatye); zama i-torsion.
Yintoni ukumelana neArc?
Ukuxhathisa kweArc kukukwazi ukumelana nearc yezinto zokwambathisa ecaleni komphezulu wazo phantsi kweemeko zovavanyo ezichaziweyo.Kulingo, isetyenziselwa ukutshintshisa amandla ombane aphezulu ngoku, ngoncedo lwearc yombane phakathi kwee-electrode ezimbini, ezinokuqikelela ukumelana neArc kwezinto zokwambathisa, ngokusekwe kwixesha elinendleko zokwenza umaleko wokuqhuba phezu komhlaba.
Ukuxhathisa ukutshisa kukukwazi ukuxhathisa ukutshiswa kwento yokwambathisa impahla xa inxibelelana nelangatye. kuthetha. Ukuphakama kokumelana nomlilo, kokukhona ukhuseleko lungcono.
Yintoni amandla eqine?
Lixinzelelo oluphezulu lokuqina oluqhutywa sisampulu kuvavanyo lwengqameko.
Olona vavanyo lusetyenziswa kakhulu kwaye lumelwe kuvavanyo lweepropathi zoomatshini zokwenza izinto zokwambathisa.
Yintoni ukunyuka kwamaqondo obushushu?
Xa iqondo lobushushu lezixhobo zombane liphezulu kunobushushu begumbi, ukugqitha kubizwa ngokuba bubushushu. Xa amandla evuliwe, iqondo lobushushu lomqhubi liya kunyuka lide lizinzile. Imeko yozinzo ifuna umahluko wobushushu ungagqithi kwi-2.
Zithini iiparameter zokhuseleko lwesinxibelelanisi?
Ukuchasana nokuvala, ukuxhathisa uxinzelelo, ukutsha.
Yintoni uvavanyo loxinzelelo lwebhola?
Uvavanyo loxinzelelo lwebhola kukuchasana nobushushu. Iipropathi zokunyamezelwa kweThermoduric zithetha izinto, ngakumbi i-thermoplastic ineempawu zokothuka okungahambisani ne-thermal kunye ne-anti-deformation phantsi kobushushu. Ukuxhathisa kobushushu bezinto ngokubanzi kungqinwa ngovavanyo loxinzelelo lwebhola. Olu vavanyo lusebenza kwizinto zokwambathisa ezisetyenziselwa ukukhusela umzimba onombane.